Global Aawaj | कम्युनिष्ट पार्टीका ७० औं स्थापना दिवस :टुटफुट र दुई तिहाईको सरकारसम्म कम्युनिष्ट पार्टीका ७० औं स्थापना दिवस :टुटफुट र दुई तिहाईको सरकारसम्म
कम्युनिष्ट पार्टीका ७० औं स्थापना दिवस :टुटफुट र दुई तिहाईको सरकारसम्म
९ बैशाख २०७६ 10:22 am
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको ७० वर्ष बितेको छ । सात दशकपछि निर्वाचनको माध्मबाट दुई तिहाइ मतसहितको सरकार गठन गरेको छ । यसलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ । शक्तिशाली सरकार गठनसम्मको यात्रा तय गर्न कम्युनिष्ट पार्टीले थुप्रै टुटफुट र एकताको श्रृङ्खला पार गर्नुपरेको छ । तत्कालीन राणा सरकारको विरोधमा जनमत निर्माण गरी देशमा सामाजिक रुपान्तरण र जागरणका लागि पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाइमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । सिद्धान्ततः माक्र्सवाद र लेनिनवादमा विश्वास गर्ने भएपनि शुरुमा एउटै नाममा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीमा समयक्रममा मतभेदसँगै अनेक विभाजन आए ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरन्जन गोविन्द वैद्य र नारायण विलास जोशीको पहलमा २२ अप्रिल वि.सं. २००६ सालमा भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ मा पहिलो घोषणा–पत्र जारी गरिएको थियो । ‘पहाड, पर्वत, खोलानाला जग्गाजमिन सबको, मालिक हामी दास बनौं किन ? हिस्सा सबमा सबको’ भन्ने उद्घोषकासाथ पहिलो घोषणापत्रले लोकजनवादी नेपालको निर्माण ग¥यो । पार्टीले सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी नेपाली क्रान्तिको दिशा अवलम्वन गरेको थियो ।
वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालालाई काराबास पठाएको घटनालार्ई केशरजङ्ग रायमाझीले स्वागत गर्नुभयो । पुष्पलाल, मोहनविक्रम सिंह, तुलसीलाल अमात्य र मनमोहन अधिकारी रायमाझीको विपक्षमा उभिनुभयो, पार्टी विभाजनको रेखा त्यहीबाट कोरियो । समयक्रममा पूर्व मेची कोशी प्रान्तीय कमिटी पनि बन्यो तर अर्कोतिर रायमाझी समूह तयार भयो । त्यसपछि २०२५ सालमा पार्टी पुनः विभाजनमा प¥यो । २०२८ सालमा झापा जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय न्यूक्लियस गरी दुईटा समूह बन्यो । एउटाको नेतृत्व सिपी मैनाली र अर्कोको नेतृत्व मोहनविक्रम सिंहले गर्नुभयो ।
२०३८ सालमा रायमाझी समूह पनि विभाजन भयो । २०२८ सालतिर केपी शर्मा ओली झापाली समूहको सक्रिय युवा नेता हुनुहुन्थ्यो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यतिबेलाका कुनै धारमा नभए पनि पुष्पलालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुभएको थियो । तर उहाँ पुष्पलालसँग बस्नु भएन । उहाँ मोहनविक्रम सिंहसँग रहनुभयो । यता, झापाको विद्रोही समूहले आफ्नो पार्टीलाई परिमार्जन गर्दै अखिल नेपाल को–अर्डिनेसन कमिटी बनायो । यही समूह मिलेर २०३५ मा सिपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा (माले) बन्यो । वि.सं. २०३६ सालमा मनमोहन अधिकारीले गठन गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनमत संग्रहमा बहुमतको पक्षमा लाग्यो । तर त्यतिबेला गठन भएको मालेले जनमतसंग्रह बहिष्कार ग¥यो ।
पुष्पलालको निधनपछि उहाँको समूहलाई सम्हाल्दै आउनुभएका बलराम उपाध्याय र साहना प्रधानले २०४३ सालमा मनमोहन अधिकारीको पार्टीसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) बनाउनुभयो । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनमा मनमोहन सिहं नेतृत्वको पार्टी र सिपी मैनालीको मालेसहित अन्य साना समूह मिलेर संयुक्त वाम मोर्चा गठन गरेको थियो । जनआन्दोलनले पञ्चायती शासनको अन्त्य गरेपछि नेकपा माक्र्सवादी र नेकपा माले बीच एकता कायम भयो । एकतापछि एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बन्यो र त्यसको महासचिवमा मदन भण्डारी हुनुभयो ।
वि.सं. २०५० जेठ ३ गते मदन भण्डारीको निधनभएपछि माधवकुमार नेपाल महासचिव बन्नुभयो । महाकाली सन्धिलाई लिएर पार्टीमा विवाद हुँदा वामदेव गौतमले २०५४ सालमा पार्टी फुटाएर सिपी मैनालीसँग मिलेर माले गठन गर्नुभयो । पछि वामदेव गौतम एमालेमै फर्किनुभयो । जनमत संग्रहमै २०३६ मा मोहनविक्रम सिंहको चौथो महाधिवेशन पनि विभाजित भयो । त्यसबाट निर्मल लामा निस्केर नेकपा (चौम) गठन गर्नुभयो । मोहनविक्रम सिंहको साथमा रहनुभएका ‘प्रचण्ड’ सक्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यसक्रममा २०४१ सालको पाँचौं महाधिवेशनबाट मोहन वैद्य (किरण) महामन्त्री हुनुभयो । पछि सो पार्टीबाट फेरि मोहनविक्रम सिंह अलग हुनुभयो ।
मोहन वैद्यले नेकपा मशाल बनाउनु भयो र मोहनविक्रमले मोटो मशाल बनाउनुभयो । प्रहरी बुथ आक्रमण गर्ने सेक्टर घटनापछि बैद्य नेतृत्वमा रहनु भएन । २०४५ सालमा नेकपा मशालले प्रचण्डलाई महामन्त्री बनायो । पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलको पुनःस्थापनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपाले मशाल, निर्मल लामाको पार्टी नेकपा चौम, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र रूपलाल विश्वकर्माको समूह मिलेर नेकपा (एकता केन्द्र) बनाउने निर्णय ग¥यो । एकताको दुई वर्ष नबित्दै सशस्त्र युद्धको विषयलाई लिएर सो पार्टीमा मतभेद शुरू भएको थियो । त्यही मतभेदका कारण २०५१ मा निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लिलामणि पोख्रेल लागयतले नेकपा (एकता केन्द्र) गठन गर्नुभयो ।
पछि प्रचण्ड पार्टीको नामसँग माओवादी जोडेर सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो । जनयुद्ध चलिरहेकै बेला २०५९ सालमा मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्रबीच एकता भयो । तर त्यो पार्टी धेरै दिनसम्म एकसाथ रहन सकेन । २०६३ सालमा फेरि विभाजित भयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठको समूहले त्यसैसँग एकीकरण ग¥यो भने चित्रबहादुर केसी, साध्यबाहदुर भण्डारी, सीपी मैनाली, मोहन विक्रम सिंह अलग अलग पार्टी बनाएर नेतृत्व गर्नुभयो ।
पछि संसदीय व्यवस्थालाई लिएर माओवादीबाट मोहन वैद्य अलग हुनुभयो । २०७५ जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालिन नेकपा (एमाले) र तत्कालिन (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भयो । एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । नेकपा बन्नेक्रमा विश्वभक्त दुलाल (आहुती), गोपाल किँराती अलग हुनुभयो । ‘मुठ्ठीभर सामन्तको कब्जामा रहेको सत्ता हटाएर जनताको वास्तविक सरकार बनाउने’ उदेश्यसहित स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीलाई अहिले साँच्चि नै स्थापनाकालीन नीति कार्यन्वयन गर्ने अवसर छ । यद्यपी २०४७ सालपछि सबभन्दा बलियो सरकारको रुपमा गठन भएको वर्तमान सरकारलाई वास्तविक कम्युनिष्ट सरकार नभएको भन्दै परम्परागत अवधारणालाई पछ्याईरहेका केहि समूह अझै पनि छुट्टै कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा क्रियाशील छन ।
नेकपाका नेताहरुले एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बन्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उनीहरुलाई पनि बदलिँदो परिस्थिति अनुसार नयाँ ढंगको कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने गरी मूलधारमा एकीकृत हुन आग्रह गरिरहनुभएको छ । तर, वामबुद्धिजीवी एवं लेखक श्याम श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ–अलग अलग साना साना समूहमा रहेका कम्युनिस्टहरुको बीचमा एकीकरण तत्काल सम्भव छैन ।” जनमतको हिसाबले अहिले पनि देशको धेरै मानिसहरु कम्युनिष्ट पार्टीप्रति आस्थावान छन् । तर को वास्तविक कम्युनिष्ट को नक्कलि कम्युनिष्ट भन्ने पुरानो आरोप प्रत्यारोप अहिले पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित कम्युनिष्टहरुबीच जारी छ । सुरेशकुमार यादव /गोरखापत्र अनलाइन
लुम्बिनीका ११ जिल्लामा आज एमालेको अधिवेशनः सर्वसम्मत नेतृत्व टुंग्याउन कसरत
महाधिवेशनपछि माओवादी पूर्व लडाकू एमालेमा प्रवेश गर्दैछन् : ओली